လှိုင်းထန်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း- ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အန္တရာယ်နှင့် အကြံဉာဏ်များ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 15/06/2022 16:09 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကြာကြာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုတိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတစ်ခု အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ လေယာဉ်သည် နှောင့်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ရုတ်တရက် ဆင်းသက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးစဉ်တွင် အဖုအထစ်အနည်းငယ်နှင့် တိုက်မိလျှင်ပင်။ လေယာဉ်များသည် ရုတ်တရက် ရွေ့လျားပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ တုန်ခါလာသောအခါတွင် လှိုင်းထန်မှုကို ခံစားရပြီး အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုများသည် ပျံသန်းမှု အမြန်နှုန်း၊ လေစီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်နှင့် မတူညီသော ရာသီဥတု အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သို့သော် လူတော်တော်များများ မသိကြပါ။ turbulence ဆိုတာဘာလဲ.
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆောင်းပါးတွင် turbulence ဟူသည် အဘယ်အရာ၊ ၎င်း၏လက္ခဏာများနှင့် ၎င်း၏အရေးပါမှုတို့အကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 turbulence ဆိုတာဘာလဲ
2 ဘယ်အချိန်နဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိလဲ။
4 သူတို့က အန္တရာယ်ရှိလား။
5 လှိုင်းထန်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အကြံပြုချက်များ
Turbulence ဟူသော စကားလုံးသည် လက်တင်ဘာသာ turbulentĭa မှ ဆင်းသက်လာကာ၊ တုန်လှုပ်ခြင်း (စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အခြေအနေ) ကို ရည်ညွှန်းသည်။ လေယာဉ်သည် လေ၀င်လေထွက်၏ အမြန်နှုန်းနှင့် ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ရွေ့လျားသောအခါ လှိုင်းထန်ခြင်း ခံစားရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ လေအမှုန်အမွှားများ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားသောအခါ၊ များသောအားဖြင့် လေရဟတ်ပုံစံဖြင့် အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Turbulence ကို မတူညီသော ရာသီဥတု အခြေအနေများဖြင့် ဖန်တီးပါသည်။
အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းများမှာ တိမ်များဖွဲ့စည်းခြင်း (ပို၍တိကျသည်- ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ထွန်းသောတိမ်များ)၊ မုန်တိုင်းများ၊ နှင့် တောင်ကုန်းကြမ်းများ သို့မဟုတ် ဂျက်စထရိများ။ လေတိုက်ခတ်ခြင်း (Wind shear)၊ ပျံသန်းမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားသော ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်သည် လေတိုက်နှုန်းနှင့် ဦးတည်ချက်တွင် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပျံသန်းစဉ်မှာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် မတော်တဆမှု အမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်ကိုယ်တိုင်က တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ တုန်ခါမှုပါ။. ကြီးမားသော လေထုထည်ကြီးသည် လေယာဉ်၏ တောင်ပံထိပ်များနှင့် တိုက်မိသောအခါ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် လေယာဉ်မှူးများသည် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခြေအနေမှန်သမျှကို ထိန်းချုပ်ရန် စမ်းသပ်မှုများနှင့် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။
ဘယ်အချိန်နဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိလဲ။
ညလေကြောင်းခရီးစဉ်များ သို့မဟုတ် နံနက်စောစောပျံသန်းမှုများတွင် နေ့စဥ်အချိန်များတွင် လေ၀င်လေထွက်ပိုမိုချောမွေ့သောကြောင့် လှိုင်းထန်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့ဘက်တွင် ပျံသန်းပါက ခရီးစဉ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုကို ခံစားရနိုင်သည်။
ပုံမှန် တိုတောင်းသော ခရီးစဉ်များတွင် ၎င်းတို့သည် နိမ့်သော အမြင့်တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်း အချို့သော ခရီးဝေး လေယာဉ်များသည် ချွင်းချက်မရှိပါ။ အိန္ဒိယ သို့မဟုတ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းပါက အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
တုန်လှုပ်ခြင်း အမျိုးအစား သုံးမျိုးအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ထုတ်နိုင်သည်-
အပျော့စား လှိုင်းထန်ခြင်း- ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို လေယာဉ်ပေါ်တွင်ပင် မတ်တပ်ရပ်သွားစေနိုင်သည့် လေယာဉ်၏ သေးငယ်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလယ်အလတ် လှိုင်းထန်မှု- ဒါက ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုပါ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လဲကျနိုင်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သော လှိုင်းထန်ခြင်း- ဒီသုံးမျိုးထဲက အဆိုးဆုံးပဲ၊ လေယာဉ်က ထိုင်ခုံမှာ ကပ်ထားသလို ခံစားရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ထိုင်ခုံကနေ "ပျံသန်း" သွားမှာပါ။
Turbulence သည် လေယာဉ်ဘေးကင်းရေးတွင် ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးအမည်မသိတဲ့ မျက်နှာမှာ ခရီးသည်တွေ ကြောက်လန့်ပြီး ခေါင်းမူးတာတောင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ လှိုင်းလေထန်နေလို့ မကြောက်သင့်ဘူး။ လေယာဉ်များသည် အပြင်းထန်ဆုံး လှိုင်းထန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။. ဤဒုက္ခများကိုရင်ဆိုင်ရန် အပြည့်အ၀ပြင်ဆင်ထားသည့်အပြင် လေယာဉ်မှူးများသည် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သော အရည်အချင်းများရှိသည်။ အရှိန်လျှော့ပြီး အမြင့်ကို ပြောင်းတာက အဲဒါရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။
၎င်းတို့သည် လုံးဝတိကျမှုမရှိသော်လည်း၊ သဘာဝသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍မရနိုင်သည့်အပြင် ရာသီဥတုသည် အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် လေထန်မှုနှင့် ၎င်း၏ပြင်းထန်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ရန် အချို့အခန်းများတွင် ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အာရုံခံကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ လေယာဉ်အတွင်းတွင် အနည်းနှင့်အများ လှိုင်းလေထန်သည့် အကြောင်းရင်းများ ရှိပါသည်။ ဥပမာ, ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုတွင်ရှိသော ထိုင်ခုံများနှင့် လေယာဉ်တောင်ပံများသည် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကို သတိပြုမိနိုင်ခြေနည်းပါးပြီး၊ လေယာဉ်အနောက်ဘက်တွင်ရှိသော ထိုင်ခုံများသည် ၎င်းတို့ကို သတိပြုမိနိုင်ခြေအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ လေယာဉ်နဲ့ ထိုင်ခုံ ပိုကြီးလေလေ လှိုင်းထန်လေလေ သတိပြုမိလေလေ ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားသလိုပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဆိုးရွားသောအခြေအနေများတွင် ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပျံသန်းမှုမှ ဒဏ်ရာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် လှိုင်းထန်သည့်အချိန်အတွင်း ဝင်ရောက်ပါက လေယာဉ်မှူးသည် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို အသံချဲ့စက်ဖြင့် သတိပေးမည်ဖြစ်သည်။
လှိုင်းထန်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အကြံပြုချက်များ
သင်ဟာ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားရမှာ ဒါမှမဟုတ် လှိုင်းထမှာကို ကြောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲဒါတွေက အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာကို သင်မြင်ပြီး အကြံပြုချက်တွေကို ဆက်တိုက်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သာယာသောပျံသန်းမှုကိုခံစားပါ။ ဤသည်မှာ သင့်အား အခက်ခဲမရှိ ခရီးသွားရန် မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်သော ရိုးရှင်းသော အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။
မထွက်ခွာမီ ရေချိုးခန်းသို့ သွားပါ ခရီးတိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကြံပြုချက်က အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ လေယာဉ်မထွက်ခွာမီ ရေချိုးခန်းသို့သွားပါ ထို့ကြောင့် လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒီနည်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ခေါင်းမူးတာ ဒါမှမဟုတ် လှိုင်းထန်နေတဲ့အချိန် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ပိတ်မိနေတာတောင် ရှောင်နိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် ပြုတ်ကျခြင်းမဖြစ်စေရန် သင်မြင်ရသော လက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားပါ။
သင့်ထိုင်ခုံကို ရွေးပါ ဖြစ်နိုင်လျှင် သင်၏ထိုင်ခုံကို ရွေးချယ်ပါ။ များစွာသော ကိစ္စများတွင်၊ windows သည် သင့်အား ပိုမိုလုံခြုံသည်ဟု ခံစားစေနိုင်သည်။ သင်၏ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိတ်လန့်နေပါက၊ သင်၏ ကြောက်ရွံ့မှုသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Turbulence ကို နားလည်ခြင်း ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမည်မသိကို ကြောက်တတ်သောကြောင့် လေယာဉ်မတက်မီတွင် လှိုင်းထန်မှုဟူသည်ကို သင်သိရန် အကြံပြုထားသည်။ သူတို့ထင်သလောက် အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာ သင်တွေ့လိမ့်မယ်။
သင့်ထိုင်ခုံခါးပတ်ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ပစ္စည်းအသေးစားများကို သိမ်းဆည်းပါ။ ကြမ်းတမ်းသောလမ်းများထဲသို့ ဝင်ပါက အဖုအထစ်များ၊ ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန် ထိုင်ခုံခါးပတ်ကို စည်းပါ။ လေယာဉ် ရုတ်တရက် ရွေ့သွားပါက အဝေးသို့ မပျံသွားစေရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။
ရေဓါတ်၊ အာရုံပြောင်းခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်း- နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီအချက်သုံးချက်ကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားပါ။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေကာ လှုပ်ရှားမှုအချို့ဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် အာရုံပြောင်းအောင်ကြိုးစားပါ (စာဖတ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့် သီချင်းနားထောင်ခြင်း)။ ဖိစီးမှုအခြေအနေများတွင် ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်စေရန် သင်၏အသက်ရှူခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် လှိုင်းထန်ခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာ၊ ၎င်း၏လက္ခဏာရပ်များနှင့် ၎င်း၏အရေးပါမှုတို့ကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » turbulence ဆိုတာဘာလဲ
ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတု ကွာခြားချက်များ